Rasaasa News – Maalgashiga Isreal ee Ogaden Maxaa ka Dambeeya?
Maalgashiga Isreal ee Ogaden Maxaa ka Dambeeya?
on June 24, 2014 12:58 pm
Jijiga, June 24, 2014 – Israel ayaa maalgalin dhinaca beeraha iyo macdanta ah ka wada qaarada Afrika sanooyinkan dambe, arintaas oo wax ka badashay fikradii ay hore dadka reer Afrika uga aaminsanaayeen dalka Israel.
Dalka Kenya ayaa ka mida dalalka Afrikada bari ee Israel dhinaca beeraha ka caawiso, iyada oo siisa beeraleyda qalab casri ah oo lagu waraabiyo beeraha, kaas oo si wayn u kordhiya wax soo saarka beeraha, iyada oo ayna caradu guurin.
Atobiya oo xidhiidh siyaasadeed muddo dheer la leh Israel ayaa hada bilowday xidhiidh dhinaca wax soo saarka beeraha la xidhiidh.
Atobiya waxay doonaysa in Israel lug ku yeelato tacabka beeraha ee gabalka Ogaden, iyada oo maalqabeeno Israel ah ay dhawr goor oo hore sahan loo geeyey dhul beereedka Godey khubaro dhinaca beeraha ah oo ka socda dalka Israa,iil.
Gabalka Ogaden oo ah dhul colaadeed, kana durugsan xarunta Addis Abab, ayaa dhinaca ku haya dalka Somaliya. Atobiya, ayaa sheegta in ay wax ka qabatay amaanka gabalka Ogaden, arintan ayaa dhiiri galinaysa maalgaliyeyaasha Israel oo dalkoodu dano ka leeyahay geeska Afrika.
1931, wixii ka dambeeyey sahano is daba joog ah oo lagu hubsanayo shidaalka ku jira gabalka, waxaa la cadeeyey in shidaal ceegaago cariga Ogadeniya, yahayna dhul dihin oo aan khayraadka macdantiisa la sahmin.
Wufti laxaad leh oo uu la socdo wasiirka arimaha dibada ee dalka Israel Avigdor Liberman, ayaa dhawaan booqday Addis Ababa. Waxaa wasiirka la socday 30 shirkadood oo doonaya in ay maalgashadaan dhul beereedka Atobiya, qaar ka mida waftigan ayaa hore u booqday dhul beereedka Godey dhamaadkii sanadkii 2013.
Bogga Globes oo wax ka qora arimaha ganacsiga Israel, ayaa sheegay in shirkado reer Israel ah ay dhul balaadhan oo Atobiya ku yaal maalgalin beereed ka bilaabayaan sida gabalka Ogaden [State of Somali in Ethiopia].
Shirkadaha Israel ee maalgashanaya xiligan gabalka Ogaden, ayey ujeedadu ka fog tahay hanti ka timaad beer, laakiin gogol xaadh ugu jira siyaasad ku wajahan Carabta iyo Somalida.